Hlola iBrazil - World Tourism Portal
Izindawo ezihamba phambili eziphezulu eBrazil
Okufanele ukwenze eBrazil
Uhlu Lamagugu Womhlaba Wonke we-Unesco
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yeBrazil
Bukela ividiyo ngeBrazil
Hlola iBrazil, izwe elikhulu kunawo wonke eMelika eseMelika futhi lesihlanu ngobukhulu emhlabeni. Idume ngesiko layo lebhola (lebhola) kanye nonyaka wayo I-Carnival in Rio de Janeiro, Salvador, Recife no-Olinda. Izwe lokwehlukahlukana okukhulu, okuvela kumfanekiso wamadolobha ophithizelayo wase São Paulo emandleni amasiko angenamkhawulo e-Alagoas, Pernambuco neBahia, ihlane lehlathi lase-Amazon nezimpawu zomhlaba ezisezingeni eliphezulu njenge-Iguaçu Falls, kunokuningi ongakubona nokukwenza eBrazil.
IBrazil yayihlalwa kuphela ngabantu bomdabu, ikakhulukazi abezizwe zamaTupi namaGuarani. Ukuhlaliswa amaPutukezi kwaqala ngasekupheleni kwekhulu le-16th, ngokukhishwa kwezinkuni ezibalulekile esihlahleni se-pau brasil, lapho izwe livela khona igama laso. Ngaphandle kokubusa kwamaPutukezi, kwezinye izingxenye zeBrazil amaDashi asungula amakoloni phakathi kwe1630 ne1654.
Isiko - abantu baseBrazil
IBrazil izwe elikhulu elinezindawo zezulu ezihlukile. ENyakatho, eduze kwekhweyitha kukhona isikhathi esina nesomiso; kusuka cishe São Paulo ezansi eningizimu kukhona intwasahlobo / ihlobo / ukuwa / ubusika. Isimo sezulu sihlala sishintsha futhi kwesinye isikhathi kuyamangaza. Kungashisa ukushisa, bese kwehle phansi, bese kubanda kakhulu. Kungaba ilanga le-1, bese kuqala imvula ngomzuzu wesibili. Isimo sezulu esifudumele silungile ebhishi futhi sidlala ngaphandle.
Amahora okusebenza ngokuvamile asuka ku-08: 00 noma 09: 00 kuya ku-17: 00 noma i-18: 00. Amabhange avulwa ngoMsombuluko kuya kuLwesihlanu, 10: 00-16: 00. Izitolo zasemgwaqweni zivame ukuvala ntambama ngoMgqibelo bese zivulwa kuphela ngoMsombuluko. Izitolo ezinkulu zivula i-10: 00-22: 00, ngoMsombuluko kuze kube uMgqibelo, kanye ne-15: 00-21: 00 ngamaSonto. Ezinye izitolo ezinkulu, ikakhulukazi emadolobheni amakhulu, ziyavulwa nangamaSonto, yize kungezona zonke izitolo ezivulekile. Kungenzeka futhi ukuthola izitolo ezingamahora we-24 kanye nezimakethe ezincane ezivulekile ngitsho ngamaSonto.
Ulimi olusemthethweni lweBrazil isiPhuthukezi, olukhulunywa yibo bonke abantu (ngaphandle kwezizwe ezimbalwa, ezikude kakhulu). Ngempela, iBrazil ibinabafuduki abavela kuzo zonke izingxenye zomhlaba amakhulu eminyaka, abazukulwane babo manje abakhuluma isiPutukezi njengolimi lwabo lwebele.
IsiNgisi asikhulunywa kabanzi ngaphandle kwezinye izindawo zabavakashi. Ungalindeli ukuthi abashayeli bebhasi noma abashayeli bamatekisi baqonde isiNgisi, ngakho-ke kungaba ngumqondo omuhle ukubhala phansi ikheli oqonde kulo ngaphambi kokuthola i-cab. Kula mahhotela amakhulu kakhulu futhi okunethezeka, kungenzeka ukuthi imikhumbi yamatekisi ikhulume isiNgisi esithile.
IMata Atlantica, eBahia
I-Amazon Rainforest - I-Amazon River Basin ibambe ngaphezu kwesigamu sehlathi lomhlaba elisasele, futhi ngaphezulu kwe-60% yalokho kulele eNyakatho neBrazil - cishe amahektare ayisigidi anezinto eziphilayo ezimangalisayo. Isifunda siyikhaya lezinambuzane ezingaba yizigidi ezingama-2.5, izinhlobo zezinhlobo zezitshalo ze-40,000, izinhlobo zezinhlanzi ze-2200, kanye nezinhlobo ezingaphezu kwezingu-2,000 zezinyoni nezilwane ezincelisayo. Ingxenye eyodwa kwezinhlanu yazo zonke izinhlobo zezinyoni emhlabeni ihlala emahlathini emvula ase-Amazon, kanti eyodwa kwezinhlanu yezinhlobo zezinhlanzi ihlala emifuleni nase-Amazonia.
I-Atlantic Forest (Mata Atlântica) - Isifunda samahlathi ashisayo nasendaweni engezansi kwesifunda esisuka ogwini lwe-Atlantic lwaseBrazil sisuka eRio Grande do Norte state eNorthasta siye eRio Grande do Sul esifundazweni esiseNingizimu. Ihlathi lase-Atlantic linezitshalo eziningi ezahlukahlukene, kufaka phakathi izinhlobo eziningi zezihlahla ezinjenge-iconic araucaria Tree eningizimu noma ama-mangroves asenyakatho-mpumalanga, inqwaba yezinhlobo zama-bromeliads nama-orchid, kanye nama-revictor ahlukile njenge-capivara. Leli hlathi liphinde labizwa ngokuthi yiWorld Biosphere Reserve, enezilwane eziningi ezisengozini enkulu okubalwa kuzo ama-marmosets, ama-lion tamarin nezinkawu zesicabucabu zoboya. Ngeshwa, kususwe kakhulu ukusukela ezikhathini zamakoloni, ikakhulukazi ezokulima umoba nezindawo zokuhlala zasemadolobheni - izinsalela zemali kuthiwa zingaphansi kwe-10% yoqobo, futhi lokho kuvame ukugqashuka eziqhingini ezisentabeni. Kodwa-ke, izindawo ezinkulu zokubhukuda zivikelwe ngamakhulu amapaki, kufaka phakathi amapaki e-131 federal, amapaki wombuso we-443, kanye namapaki kamasipala we-14, iningi lawo elivulekele ukuvakashelwa.
I-Campos Gerais - Njengoba kunotshani obukhulu botshani nezindawo zokushintsha phakathi kweCerrado ne-Atlantic Forest, lesi sifunda sinikeza indawo enhle yamaxhaphozi kanye namachibi, njenge-Jaguaricatú Valley, ngaphesheya kwesihlanu nokwesishiyagalombili ebanzi kakhulu emhlabeni, ngokulandelana UGuartelá noJaguariaíva. IJaguariaíva i-canyon yenziwa umsebenzi omuhle kakhulu wokugibela eBrazil.
I-Pantanal - Umkhathi omkhulu wemvula eshisayo, ongomunye wabakhulu emhlabeni. I-80% yayo iphakathi kwesifunda saseMato Grosso do Sul kepha futhi inwenwela naseMato Grosso (kanye nasezingxenyeni zeBolivia neParaguay), igcwele indawo ecatshangelwe phakathi kwe-140,000 ne-195,000 skwele skwele (54,000-75,000 sq mi ). I-80% yezikhukhula zasePantanal zigxotshwa phakathi nezikhathi zemvula, zikhulisa ukuqoqwa okuyisimanga kwezinto eziphilayo zasemanzini nokusiza ukusekela uhlu oluningi lwezilwane.
Izimpophoma (i-Cachoeiras) - IBrazil inebanga elimangazayo lezimpophoma ezihlaba umxhwele zabo bonke osayizi nobukhulu. I-Iguaçu Falls, empumalanga yeParana, ingesinye sezimpophoma ezinhle kakhulu emhlabeni, umbono ongabonakala ngempela. ICachoeira da Fumaça engamamitha ayi-353 eBahia's Chapada Diamantina National Park iyindawo yesibili ephakeme kunazo zonke kuleli lizwe, ngemuva kweCachoeira do Araca yase-Amazon engafinyeleleki. Ezinye izimpophoma ezidumile zibandakanya iCaracol Falls, epaki yezwe iRio Grande do Sul enegama elifanayo eduze naseCanela, i-Itaquira Falls, ukuwa okufinyeleleka kalula kwamamitha we-168 eduze naseFomosa, Goiás, kanye nomqhele eParque da Cascata eduze naseSete Lagoas, eMinas Gerais . Ngaphandle kwezimpophoma ezidume kuzwelonke, ezingxenyeni eziningi zezwe, ikakhulukazi ezifundeni zaseNingizimu, Southeast, kanye neCentral West, akuvamile ukuthi okungenani ube kude nendawo eyodwa edume indawo yangakini.
Ukwakhiwa kwamakoloni - Amadolobha amaningi anezikhumbuzo zesikhathi saseBrazil sangaphambi kokulawulwa kwamakoloni, amasonto, izindlu zezindela, izinqaba, izindlu zangasese nezinye izakhiwo namanje. Ezinye zezakhiwo zamakholoni ezigxile kakhulu futhi ezigcinwe kahle zingatholakala emadolobheni amadala anombayini wegolide njenge-Ouro Preto neTiradentes, kepha amanye amadolobha amaningi njenge IRio de Janeiro, ISan Paulo, I-Petrópolis, Salvador, I-Recife, iParaty, neGoiânia banezikhungo ezibalulekile zamakoloni.
U-Oscar Niemeyer uyasebenza - uNiemeyer, umakhi wezakhiwo odumile waseBrazil, uyiphayona lesakhiwo sanamuhla elihlola umthelela omuhle wekhonkolo eliqinisiwe, usebenzisa ama-curve ukwakha izakhiwo ngomqondo ohlukile wesikhala. Udume kakhulu ngokuqamba izakhiwo eziningi lapho kwakhiwa inhlokodolobha entsha yeBrasilia kuma-1950s, kepha imisebenzi yakhe yangempela ezweni, ngemisebenzi emikhulu eNatal, eJoão Pessoa, Recife, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Niterói, ISão Paulo, iLondrina nezinye izindawo.
Iphathi elikhulu kunawo wonke emhlabeni lenza izindawo ezweni lonke unyaka nonyaka, lihlala cishe isonto ngoFebhuwari noma ekuqaleni kukaMashi. Kugujwa ngezindlela ezahlukahlukene, kusuka kumaskandi omkhulu we-boneko ka-Olinda kanye nama-trios elétricos Salvador eya kuma-samba amakhulu aseRio de Janeiro naseSão Paulo. Ukuze uthole isimo esinqotshwe ngaphezulu, hlola iphathi yomgwaqo eyunivesithi yase-Ouro Preto noma iqembu lezemidlalo e-Ilha do Mel. Ungakhohlwa ukwenza ukubhuka kwakho kusengaphambili!
Imikhosi Yonyaka Omusha
Njalo ngoNcibijane, amaBrazil amaningi abe nomkhosi oqinile okukholakala ukuthi unika inhlanhla. Abantu abasemadolobheni amakhulu kakhulu bavame ukuya ogwini ukuyobona futhi bafake isandla emicimbini yomlilo, ngenkathi begqoke okumhlophe, okuqondwe ukuthi kusho umbala wenhlanhla. Bonke baqoqa izimbali ukunikela olwandle njengoba ekuqaleni amaqembu endawo ase-Afrika ayecabanga ukuthi kungajabulisa unkulunkulukazi wolwandle, okusho ukuthi babeka izimbali phezu kwamanzi bese bezidedela ukuba zintanta ziye lapho okokugcina kuzothatha khona. Ngokuvamile lezi izimbali ezimhlophe ezinesiqu esiluhlaza kanye namaqabunga aluhlaza. Kungumkhuba ukuthi izimbali zibe mhlophe njengengubo. Abanye abantu bafaka izimbali esikebheni esincane sokudoba kanti abanye bamane baphonsa amaqabunga emanzini. Kuthiwa leli siko belilokhu likhona selokhu laqala. Akuwona wonke umuntu okwenzayo, kepha noma ngubani endaweni uzokwazi ukukwenza.
Cishe lonke ugu luhambisana namabhishi amnandi, futhi indlela yokuphila yasolwandle iyingxenye enkulu yesiko laseBrazil. Akukho lapho kuyiqiniso khona ukwedlula eRio de Janeiro, ngokudangala kwayo, indlela yokuphila enezinyawo kanye namabhishi adumile njenge-Ipanema neCopacabana. Amabhishi kwezinye izindawo zezwe kungenzeka angabi nalo igama lokuqashelwa ngaso leso sikhathi kepha akumangalisi kangako. INyakatho-mpumalanga inezinsimbi ezifana neJericoacoara, uPraia do Futuro, iBoa Vista, uPorto de Galinhas, noMorro de São Paulo abalethela izixuku zabahambi, ikakhulukazi abaseYurophu. Ama-mineiros avaliwe ahlangana nezicebi nezidumile eGuarapari noma ukudansa i-forró esihlabathini e-Itaunas, kuyilapho i-paulistas ilibangise eCaraguá noma Ubatuba. ENingizimu, izimpimpi zangempelasonto zithutheleka ku-Ilha do Mel noma uBalneário Camboriú, kanti amabhishi ama-42 eSanta Catarina Island adweba izinkulungwane zezivakashi zase-Argentianian minyaka yonke. Amakhulu amaningi emabhishi alungele ukuqunjelwa futhi.
I-Soccer - Soccer iyinkulumo yedolobha noma ngabe ukuphi eBrazil, futhi izwe ligcwele amaqembu amakhulu nabadlali abakhulu. I-Rio de Janeiro inenkundla yezemidlalo edume umhlaba wonke iMaracanã, iMyirão e-Belo Horizonte, eMorumbi Stadium eSão Paulo, e-Arena Grêmio naseBeira-Rio ePorto Alegre.
IVolleyball - Ngenkathi ibhola likumdlalo oyinhloko eBrazil, kujwayelekile kakhulu ukuthola izikhala emabhishi lapho ungadlala khona i-volleyball yasolwandle, kepha le nguqulo yomdlalo inekhodi ehlukile yemithetho kune-volleyball yangaphakathi (ngokwesibonelo esikhundleni sabadlali abayisithupha, abadlali ababili kuphela abavunyelwe ukudlala eqenjini ngalinye).
I-International Charter Group: I-Yacht charter kanye nokuhamba ngomkhumbi, enye yezinkampani ezinkulu kakhulu ze-yacht charter, zinganakekela zonke izidingo zomthetho, ukusuka kusikebhe ukuya esikebheni eBrazil. Isebenza kusuka emahhovisi ayisishiyagalolunye emhlabeni jikelele (i-USA, Spain, UK, Germany, Italy, France, Spain, Switzerland, I-Caribbean, Honk Kong kanye Dubai).
I-Jiu-Jitsu yaseBrazil: Omunye wabo, uma kungenjalo ubuciko obudlula bonke, obusezingeni eliphezulu owake wakhiwa umndeni kaGracie waseRio de Janeiro.
“Ama-Olimpiki” - Izemidlalo ezihola phambili kwezemidlalo zenzeka ngo-Agasti 5 - Agasti 21 2016 ngo Rio de Janeiro. Abasubathi abangu-6177 bancintisana emicimbini engama-306 emidlalweni engama-28.
Kuyafana nase-Latin America yonke, ubucwebe obunjwe ngesandla bungatholakala noma kuphi. Ezifundeni ezihlalwa kakhulu abantu base-Afro-Brazilians uzothola izikhumbuzo eziningi ezithonywe yi-Afrika, kufaka phakathi onodoli abamnyama. Izimbadada ze-Havaianas nazo zingabizi eBrazil futhi nezitolo ezinkulu zivame ukuba yindawo engcono kakhulu yokuzithenga - izitolo ezincane zivame ukuthwala ezingezona ezingamanga. Uma unesikhala esikhwameni sakho, i-hammock yekotoni yaseBrazil iyintengo enhle, yokuthenga esebenza kahle. Enye into ethokozisayo nejabulisayo yi-peteca, uhlobo lwenqola yesandla esetshenziswa kumdlalo wendabuko wegama elifanayo, elifana ne-volleyball.
Akuwona umqondo omubi ukupakisha ukukhanya futhi uthole izingubo zaseBrazil ezinsukwini ezimbalwa zokufika. Kuzokukwenza ungabonakali ngokusobala njengesivakashi. Abantu baseBrazil banemizwa yabo yesitayela futhi lokho kwenza ukuthi izivakashi - ikakhulukazi lezo ezigqoke amahembe noma izimbadada zaseHawaii - zibukeke esixukwini. Iba nokuthenga okujabulisayo, bese uhlanganisa.
Amafasitela wesitolo avame ukubonisa intengo elandelwa yi- "X 5" noma "X 10", njll. Lokhu kuyintengo yokuthengisa yokufaka. Intengo ekhonjisiwe yintengo efakwa ngakunye, ukuze, "R $ 50 X 10", ngokwesibonelo, kusho izinkokhelo ze-10 (ngokuvamile zenyanga) ze-R $ 50 ngayinye.
Qiniseka ukuthi noma iyiphi impahla oyithengayo ingamandla amabili noma efanayo ezweni lakini. Imvamisa eBrazil yi-60Hz, ngakho-ke ungawathengi amawashi kagesi noma izinto ezenziwa ngebhethri uma uhlala eYurophu noma emazweni afana ne-Argentina, Australia or E-New Zealand. I-Voltage nokho iyahlukahluka ngesifunda noma ngisho nezifunda ngaphakathi kwesifunda esifanayo.
Imishini eyenziwe eBrazil nezinto ze-elektroniki zivame ukubiza kakhulu noma zisezingeni eliphansi. Yonke into esebenza ngogesi iyabiza ngokuqhathaniswa namanani aseYurophu noma e-US.
Kunezinto eziningi ezishibhile okufanele zibe nazo, ikakhulukazi izimpahla zesikhumba, kufaka phakathi izicathulo (khumbula amasayizi ahlukile). Izingubo zizonke zithengwa kahle, ikakhulukazi kwabesifazane, okukhona kubo izinto eziningi ezinhle. Izimakethe zasemgwaqweni, ezivamile, ziyindlela engabizi kakhulu, kepha gwema amagama omkhiqizo njengo- “Nike” - uzokhokha ngaphezulu futhi kungamanga. Ungesabi "ukuzwa" into ethile. Uma kuzizwa kungalungile, kungenzeka ukuthi akunjalo. Qaphela ilebuli eyethusayo ethi "Made in China", futhi ukhumbule eminye imikhiqizo eyenziwe eBrazil ayisiqinile kunabalingani babo baseMelika noma baseYurophu.
Ukuthi uzodlani-isiphuzo eBrazil
Isizini ephezulu eBrazil ilandela ikhalenda leholide lesikole, uDisemba noJanuwari (ehlobo) okuyizinyanga ezixakeke kakhulu. Unyaka omusha, I-Carnival yaseRio (enyakaziswayo phakathi kukaFebhuwari noMashi, bheka i-ukuqonda ngenhla) kanye neviki eNgcwele ziyizikhathi eziphakeme kakhulu, futhi amanani anganyuka, ikakhulukazi emadolobheni asogwini afana Rio futhi Salvador. Futhi, phakathi nalawo maholide, amahhotela amaningi akhawulela ukubhukelwa ubuncane bezinsuku ezingama-3 noma ama-4 futhi azokhokhisa ngaphambi kwesikhathi.
Amahhotela maningi cishe kuzo zonke izindawo zaseBrazil futhi angahluka ukusuka ezindaweni zokungcebeleka zasolwandle kuya ekukhetheni okuncane kakhulu futhi okungabizi kakhulu. Ibhodi lomthethonqubo wokuvakasha waseBrazil libeka ubuncane bezimpawu ezithile zohlobo ngalunye lwendawo, kepha njengoba isilinganiso senkanyezi se-1-5 singasasebenzi, hlola kusengaphambili uma ihhotela lakho lihlinzeka ngohlobo lwezinsizakalo olindele.
Ngokomthetho, wonke umuntu kufanele aphathe i-ID yesithombe ngaso sonke isikhathi. Okwesinye isizwe, lokhu kusho ipasipoti yakho. Kodwa-ke, ikakhulukazi amaphoyisa azothuthukisa futhi amukele isithombe esibonisa umbala osepulasitiki.
Amakhofi e-Intanethi (izindlu ezingamaLan) aya ngokuya evame kakhulu, futhi namadolobha amancane ngokuvamile anendawo okungenani eyodwa anokuxhumana okuningi noma okuncane.
Inani elikhulayo lamahhotela, izikhumulo zezindiza kanye nezitolo ezinkulu zezitolo zinikeza izindawo ezikhethekile zeWi-Fi nekhompyutha yakho ye-laptop. Uma usendleleni yokuhlola iBrazil ayikho into ozozisola ngayo usendleleni eya ekhaya.
Idolobha elingokomlando lase-Ouro Preto
Isikhungo Somlando seDolobha lase-Olinda
AmaJesuit oMhlangano wamaGuaranis: ISan Ignacio Mini, iSanta Ana, iNuestra Señora de Loreto noSanta Maria Mayor (e-Argentina), Amanxiwa eSao Miguel das Missoes (eBrazil) *
Isikhungo Somlando SeSalvador de Bahia
ISanhala yeBom Jesus do Congonhas
ISerra da Capivara National Park
Isikhungo Somlando São Luís
Isikhungo Somlando seDolobha laseDiamantina
Isikhungo Somlando seDolobha laseGoiás
ISão Francisco Square eDolobheni laseSão Cristóvão
IRio de Janeiro: Izindawo eziCarioca zomhlaba ophakathi kweNtaba noLwandle
I-Pampulha Modern Ensemble
Isiza sase-Valongo Wharf Archaeological